Daawooyinka la isku cadeeyo
» Daawooyinka la isku cadeeyo
Daawada "Dermovate" waa daawo loogu tala galay in lagu daaweeyo cudurrada maqaarka ku dhaca uu keeno fangaska.
Laakiin waxaa si sharci darro ah ay haweenka soomaaliyeed u isticmaalaan in la isku cadeeyo iyadoo la isticmaalo muddo dheer loona isticmaalo qaab ka duwan qaabkii daaweynta ahaa.
Dhibaatada ay keensato daawadaan lama tiro koobi karo waxaa hadda ka hor sanadkii 2008dii ayaa haweeney soomaali ah oo wadanka ingiriiska gashay tagtay isbitaal iyadoo ka cabanayso: miisaankeeda oo sii dhacayo, uur inay yeelan wayday iyo xariiqmo dhaadheer oo jirkeeda ka soo baxay.
Takhaatiirtii markay ku wareereen cudurkeeda iyadane ay inkirtay in ay wax daawo ay marsatay ayaa markii dambe qiratay in muddo 7 sano ah ay isticmaali jirtay iyadoo ay ka soo gadato dukaan!!!.
Badanaa daawooyinka kareemka ah waxaa ku jiro laba maaddoo oo sun ku ah jirka oo kala ah: Steroids iyo hydroxyquinone oo jirka u keeno dhibatooyin aan la soo koobi karin.
Midda fitamiinnada iyadane waa fikrad khaldan oo la aaminsanyahay maxaa yeelay vitamiinnada looma isticmaalo in la isku cadeeyo ee waa daawo loogu tala galay in la siiyo qofkii ay fitamiinnada jirkiisa ay ku yaryihiin, qofkii isagoo fitamiinno aysan ku yarayn joogteeyo isticmaalka fitamiinnada waxaa ku dhaco wax loo yaqaanno "Hyprevitaminosis" oo ah manaheedu in qofku uu ku samoobo fitamiinnadii laftirkooda.
Fikradda ah in fitamiinka oo qofka nuuriyo ama maqaarkiisa uu ifo waa arin jirta laakiin waa haddii sida saxda ah iyo cunooyinka laga helo la cuno ee maahan in daawo ahaan loo qaato.
Midda kale fitamiinnada oo dhan maahan kuwa oogada wax u tara ee waa fitamiinnada C iyo E kaliya.
Anonymous12/30/2011asc walal wan kusalaamay walal wax daawo ah oo dabeeci ah oo loo istic maalo xariiqimaha ama jeex jeexa dharer ee jirka marka qofku dhuubto catobo ama buurto ma isheegi kartaa mahadsanid walal ascReplyDeleteRG12/31/2011http://raaxadaguurka.blogspot.com/2011/12/sida-loo-daaweeyo-jeexjeexa-jirka-oo-ka.htmlReplyDeleteRG12/31/2011halkaan ka akhriso jeexjeexa jirka waxa lagu daaweeyo oo dabiici ahhttp://raaxadaguurka.blogspot.com/2011/12/sida-loo-daaweeyo-jeexjeexa-jirka-oo-ka.htmlReplyDeleteAnonymous1/01/2012asc waxaan ahay gabar aan guursan hadane ku dhacay dhiig bax mudo dheer waxaa la ii soo qoray kaniiniga la dhaho [primolut-nor 5 mg}oo saxaayo dhiiga mudo 6 bil cun ayaa la idhay marka waxaan ka baqayaa hadii aan iska daayo kaniinigaas in uu hadane i ku dhaco maxaa keeni kara dhiig baxaas iyo dhib maleedahay hadii aan iska wado mudo dheer oo aniga ku qanci karo daawadan maadaama aan ka cabsanaayo dhiig bax kale maxee dhibaato leedahay mahadsanid walaal jasaakumulaah qayranReplyDeleteRG1/01/2012walaal dhiigga kugu dhacay waxaa la dhahaa dhiig shuban afka carabigana waxaa lagu dhahaa دم الاستحاضة ma aha sida dhiiga caadada oo kale waa dhiig ka soo go'a xidid marka waxaan kula talain lahaa inaad u tagto dhakhtarad si ay u eegto mushkiladaadaReplyDeleteAdd commentLoad more...